Ciidamo qarax lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Ciidamo qarax lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan
Ciidamo qarax lagula eegtay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan
Wararka aan ka Helayno Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Qarax khasaare Gaystay uu ka dhacay inta u dhaxeeysa Degaanada beergadiid iyo Coomaad oo u dhaxeeyo Beledweyne iyo Maxaas.
Qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu Aaso ayaay wararku sheegayaan in lala eegtay Kolonyo Gaadiid ah oo ay wateen Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya, waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday laba qof oo kala ah askari ka tirsan Ciidanka dowladda iyo qof kamid ah maleeshiyaadka macaawiisleeyda halka Saddex qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in xilliga qaraxa uu dhacayay ay Ciidamada howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka wadeen inta u dhaxeeysa Degaanada beergadiid iyo Coomaad , isla markaana qaraxa kadib ay fureen rasaas farabadan.
Wararka ayaa intaa raacinaya in dadka ku dhaawacmay qaraxaas la geeyay Isbitalka degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud si halkaasi loogu daaweeyo, kuwaasoo la sheegay inuu dhaawacooda fudud yahay.
Dhowr jeer ayaa degaano ka tirsan Gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay qaraxyo lala eegtay Ciidamada dowladda Soomaaliya & dagaalo xoogan oo dhx-maray Ciidamada dowladda & Al-Shabaab.
dhanka kale Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel ee Gobolka Galgaduud oo ka warbixiyay Amniga guud ee Degmaas iyi deegaanada Hoos tagay ayaa soo saaray Amaro Bulshada laga Taliyaha Booliska Guriceel Cismaan Cali Hudeey ayaa ku dhawaaqay Amaro la xiriira amniga,oo lagu soo rogay gaadiidleeyda degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Waxaa uu ku amray gaadiidka ka shaqeeya degmada Guriceel muddo 15 Cisho gudahood ah ay isku soo diiwaan geliyaan, sidoo kale Caruurta ka yar 15 sanno aysan dhex socon karrin Magaaladda wixii ka danbeeya 09 fiidnimo kadib markii ay Magaalada ku soo bateen Carruur dhagxaanta ku tuuraya Gawaarida.
Sidoo kale Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka Garsoorka u doonta Al-Shabaab.
Amaradaan kasoo baxay Taliyaha Ciidanka Booliiska Degmadda Guriceel Cismaan Cali Hudeey ayaa kusoo aadayaa xilli Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab la sheegay inay kusoo dhawaadeen degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud.
Previous articleDHAGEYSO:Adeegga korontada oo la gaarsiinaya Xuluuqo
Next articleCiidamada booliska ee Tunisia oo xoog ku galay xarunta warbaahinta Al Jazeera ee dalkaasi